Nabatara na Scalable Mobile Email Design | Martech Zone
Fraịdee, June 21, 2013 Wednesday, June 19, 2013 Douglas Karr
Yesmail Interactive bipụtara akwụkwọ akụkọ akpọrọ, Mobile Email Design-Marketing Fit for the Small ScreenOpens na windo ọhụrụ, na-ekwuwapụta ihe karịrị pasent 36 nke ozi ịntanetị meghere na ngwaọrụ mkpanaka, nke a na-eme atụmatụ ịnọgide na-eto eto kwa afọ.
Ka ndị ahịa na-aga n'ihu na mkpanaka ha iji lelee email, ọ dị mkpa karịa oge ọ bụla maka ụdị ịkpọ oku ka ha mee ihe dị mfe ịgbaso. N'ụzọ dị mwute, pasent 76 nke ụdị naanị na-enye usoro aghụghọ mkpanaka - ma ọ bụ na ịnweghị otu ma ọlị.
Nke a na-egbochi ndị ahịa itinye aka na ọdịnaya ma ọ bụ na-eme azụmahịa n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara n'ime ha na-ekwu na ozi ịntanetị na-esiri ike ịgụ n'ihi oke ịpịgharị na pasent 29 na-ezo aka na nhazi na-ezighi ezi maka ihuenyo mkpanaka ha.
Iji hụ na ndị na-azụ ahịa nwere ike iji ọdịnaya ha na-emekọrịta ihe, ụdị kwesịrị iji atụmatụ ngwakọ nwere ma ihe na-anabata ma na-enweghị atụ. Isi uru bụ:
Nnukwu logo ma jikọọ na weebụsaịtị.
Ibu uzo ka ukwuu ma ya mere pịa-site na ọnụego
Increbawanye elekwasị anya na ọdịnaya ọdịnaya
Ederede buru ibu karị ma kpọọ oku ime ihe
Njupụta nke itinye aka na ekwentị chọrọ ka ndị ahịa kpọọ oku ka ọ rụọ ọrụ dị mfe ịgbaso na ihu igwe. Ikike, nghọta doro anya na ahụmịhe dị mma dị na ntanetị na-eme ka ndị na-azụ ahịa denye aha ma na-emekọrịta mmemme email nke ika.
Tags: emailemail imeweemail mkpanakaimewe email imeweemail na-anabataEkele email
Nov 6, 2013 na 5:02 PM
Ihe omuma di egwu maka ebe ihe omuma ihe omuma. Lelee ya ebe a: http://goo.gl/7S6pye
Jun 10, 2014 na 11:46 AM
O doro anya na ọtụtụ mmadụ na-enwe mgbagwoju anya banyere ihe anaghị anabata ya na ihe a na-anabata mgbe ị na-agụ isiokwu email ahụ. Isi ihe dị na email a na - apụghị ịkọwapụta bụ ime ka ọ bụrụ ọkachamara.